डा गोबिन्द केसीसँग मध्यरातमा सरकारले ८ बुदे सहमति गर्यो; सहमति पत्र सहित - Likhu Online
डा गोबिन्द केसीसँग मध्यरातमा सरकारले ८ बुदे सहमति गर्यो; सहमति पत्र सहित
२५ आश्विन २०७७, आईतवार ०१:०० प्रकाशित
असोज २५, काठमाण्डडौ । डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ८ बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपिनाथ मैनाली र डा. केसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । १९ औं पटक अनशन बसेको २७ औं दिनको दिन सहमति भएको हो ।
सहमति भएसँगै डा. केसीले आइतबार विहान अनशन तोड्ने भएका छन् । बिहीबार र शुक्रबार भएको वार्ता असफल भएपछि सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल गरेपछि सहमति जुटेको हो ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको गरेको थियो भने डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्य वार्ता टोली बनेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको ६ बुँदे माग राख्दै डा. केसी १९ औं पटक अनशन बसेका थिए । ८ बुँदे सहमतिमामध्ये छ बुँदा डाक्टर केसीको मागका विषय रहेका छन् । ७ नम्बर बुँदामा सहमति कार्यान्वयनको विषय छ भन८ नम्बर बुँदामा अनशन तोड्ने विषय छन् । मागलाई सरकारले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो छ सहमतिपत्र :
स्याउ बोक्रैसँग खानुका फाइदाहरु
बालबालिकालाइ कस्तो ब्यवहार गर्नु पर्छ ?
डा गोबिन्द केसीले २८ दिन लामो सत्याग्रह तोडेका छन
डा. गोविन्द केसीसँग सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदै, आजै अनशन तोडिने
डा केसीलाइ निशर्त अनसन स्थगित गर्न सरकारको अनुरोध
डा केसि र सरकार बिचको वार्ता स्थगित
अनसनरत डा केसिको स्वास्थ अवस्था थप जटिलबन्दै
म्याद सकिएका खाद्य वस्तुमा नया लेबल लगाएर काठमाडौमा ठगि धन्दा गर्ने प्रहरि फन्दामा ।
वार्तटोली गठन गर्न सरकारलाई चिकित्सा संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम
बाटैमा डा केसिलाइ गिरफ्तार गरियो, केसि भन्छन यो प्रहरि गुण्डागर्दि हो ।
महिनावारी हुँदा के खान मिल्छ? के मिल्दैन ?
बेसारको प्रयोग र फाइदा